लिभिङ टुगेदर | मझेरी डट कम
सदरमुकामकै एक क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकायमा भर्ना भएर पढ्न थालिन् कविता । उनी जस्तै गाउँ गाउँबाट आएका साथीहरू ऊसँगै थिए । कोही कोही बाहेक आफन्त भएका कोही थिएनन् । कविता भने गाउँकै एक जना डिप्लोमा पढ्ने दिदीसँग बस्न थाली । विहान क्याम्पस जाने र बाँकी समय सदरमुकाम घुम्ने दिनचर्याका बीच वित्ने ‘जीवन रमाइलै हुँदो रहेछ ।’ कविताको नौलो अनुभव थियो ।
यसैबीच उनीहरुको कोठामा साथी बन्न एकजना युवक आइपुगे । ‘दिपेन्द्र, भित्रै आऊ’ भन्दै कविताको गाउँले दिदीले कोठा प्रवेश गराको त्यो केटो को हो? कवितालाई थाहा भएन । त्यो केटा उनको गाउँले होइन भन्नेमा पक्का थिई कविता । ऊ को हो भन्ने थाहा पाउन उनलाई केही गर्नै परेन किनभने उनलाई थाहा पाउनु नै थिएन । उनले नचाहे पनि थाहा पाइसकेको थियो उनको नाम, दिपेन्द्र हो । साथमा उसको घर पनि थाहा भयो, चोङखिदो । उनी कविताकै दौँतरी मात्र नभई सहपाठी पनि थिए । अनि केही दिनमै थप दुई कुरा थाहा भो, ऊ दिदीको हुनेवाला देवर हो, दाइ विदेशमा छन्, ऊ पनि अवसँगै बस्ने हो ।
दिपेन्द्र, दिदी अनि कवितासँगै कलेज जाने आउने अनि खाने, खाएपछि दिपेन्द्र पढ्ने र कोठा सफा गर्ने, दुई बहिनी भने भाँडा माझ्ने, घुम्न जाने, घुमेर आएपछि पढाई गर्ने । रमाइलो भयो सदरमुकामको बसाइँ । समय समयमा घरबाट भट्मासको गोयाङ, भुटेको मकै र भट्मास, सागको गुन्द्रुक, कोदोको पिठो देखि गाई भैँसीको शुद्ध घिउसम्म आइराख्ने हुनाले झन् रमाइलो हुने नै भयो । खर्चको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने नै भयो । त्यसमाथि दिपेन्द्रको दाइ र दिदीको ब्वाईफ्रेन्ड विदेशबाट घरीघरी खर्च पठाउँछन् । कवितालाई दिपेन्द्र आइदिएकोमा पनि खुशी नै लाग्यो ।
‘जाऊँ बजारतिर काम छ’ एकदिन कविता र दिपेन्द्रलाई दिदीले भनी । कविताले जाने मन गरिनन्, ‘मेरो त आज होमवर्क गर्नु छ, आजको अलि गाह्रो लाग्ने रहेछ । ’दिपेन्द्रले भने, ‘आजको मलाई आउँछ, म एक छिनमै बुझाइ दिन्छु ।’ तीनै जना बजार गए, दिदीले गोजीवाट एउटा कागज झिके र ‘आईएमई’ को मान्छेलाई देखाए । ‘आईएमई’ को मान्छेले नागरिकता हेरेर केही पैसा हातमा थमाइ दियो । उनीहरू चलेको चटपटे पसलतिर गए । वेलुका दिदीले खाना पकाई, दुईजना पढ्न बसे ।
‘एयरपोर्टतिर घुम्न जाम आज’ दिदीको आज्ञा र सल्लाहले मात्र चल्ने दुईलाई यो प्रस्ताव लामो प्रतिक्षा पछि सुन्न पाएकोमा खुशी लाग्यो । एयरपोर्ट क्षेत्र लामो रहेछ, एयपोर्टको सुरु छेउमै पुगेपछि एक होटलतिर देखाउँदै दिदीले भनिन्, ‘तिमीहरू चाहेजति घुमेर आओ, म यहाँबाट कुर्छु ।’ दुई जना एयरपोर्टतिर लागे, दिदी होटलतिर लागिन् । मिठा कुराकानीसँगै एक फन्का घुमेर आउँदा पनि दिदी होटलभित्रै रहेकाले उनीहरू पनि होटलतिरै लागे । दिदी एकजना ‘दाइ’सँग बसिरहेकी थिइन्, गफ गर्दै, दिदीको आँखा रसाएका जस्ता देखिन्थे । ती ‘दाइ’ अलि असहज मान्दै बाहिरिए । दिपेन्द्रतिर नफर्की दिदीले बोली, ‘कति छिटै घुमेर आयौ?’
वेलुका दिपेन्द्र एक्लै बाहिर निस्किए ‘साथीलाई भेट्न’ भन्दै । फर्केर आएपछि कविताले सुटुक्क सोधिन्, ‘कोसँग भेट्न?’ ‘दिदीलाई नभन है’ भनेर ‘हस्’ भनाए पछि दिपेन्द्रले भने, ‘दाइसँग फोनमा कुरा गर्न हौ । ’वेलुका खाना खाएर पढ्न बस्न लाग्दा दिदीलाई विदेशबाट फोन आयो । उनीहरुको कुराकानी अनुसार यो पाली डिप्लोमा सकिएपछि बिहे गर्ने, गाउँमा खुलेको जागिरमा आवेदन दिने आदि कुरा हुँदै थिए । दिदीको ‘अलि चाँडो पो होला कि?’ को शंकालाई पनि सम्झाउने कोशिस हुँदे गरेको थाहा पाए उनीहरुले । दिपेन्द्र र कविता पढ्नमा मस्त ध्यान दिन थाले ।
डिप्लोमा सकेपछि दिदी दुईलाई छोडेर गाउँतिर लागिन् । गाउँ गएकी दिदी करिब पन्ध्र दिनपछि मात्र फकिई, ‘जागिर मिलेको’ कुरा सुनाउँदै ‘दिपेन्द्रलाई पनि बधाई छ’ भनिन् । यो कुरा सुनेर दिपेन्द्र अलमलिए, सोधे, ‘किन र?’ हाँस्दै ‘तिम्रो भाउजू हुँदैछु’ भनेपछि तीनै जना हाँसे, खुशी भए । सुत्ने वेला दिदी गीत सुन्दै थिइन्, ‘माया एउटासँग.....’
दिपेन्द्र र कविता कक्षा १२ पढिसक्ने वेलासम्म कोठामा दुई जना मात्रै परे । ‘परीक्षा दिएपछि वास हेर्न जाम, हाम्रो गाउँ...’ कविताको प्रस्ताव दिपेन्द्रलाई राम्रो लाग्यो । ‘सुनेको मात्र देखेको थिइनँ, यो पाली देखिने भो । आफू किराँति नभए पनि किराति गाउँमा जन्मिएँ, रमाइलो लाग्छ किराति चलन ।’
दिपेन्द्रलाई वास मन पर्यो । उसले वास नाच्न पनि सिक्यो, वासमा स्याउला हल्लाउन पनि सिक्यो, फेंगा लगाउन पनि मजा लाग्यो । कविताको घरमा गए, आमा बालाई ‘फलानोको देवर हो, हामी साथी हौँ ।’ भनेपछि पाहुना बनाएर राखे । फर्किदाँ उसले कवितालाई भन्यो, ‘साँचै मन पर्यो, तिम्रो गाउँ तिमीजस्तै ।’ कविताले भनी, ‘मलाई तिमी पनि’ । दिपेन्द्रले कविताको आँखामा आँखा जुधाउँदैभने, ‘म तिमीलाई राम्रो लाग्छ र?’शिर निहुराएर वोली, ‘मलाई तिमी मन पर्छ ।’हल्का मुस्कानसाथ वोले, ‘आज अप्रिल फूल त होइन नि?’
यता उता गर्दागर्दै रिजल्ट आयो, सोचेजस्तै गरी दुवैले राम्रै नम्बर ल्याएर पास गरे । डिप्लोमा पढ्नलाई दुवै पुरानै कोठामा जुरे । ‘आज म खाना बनाउँछु, तिमी पसल गएर आऊ’ कविताको प्रस्तावमा ‘सधैं यस्तै गरी साथै रहन पाए हुने, तिमी खाना बनाउँथ्यो, म सघाउथें’भनेर दिपेन्द्र बाहिर निस्किए ।
वेलुका खानापछिसुत्ने वेला दिपेन्द्रले भने, ‘कविता!तिमी पनि मलाई राम्री लाग्छ, पहिलो भेटदेखि नै, तर के सोच्ली भनेर चुप लागेँ, किनकि तिमी धेरै राम्री...’ कविता दिपेन्द्रको नजिक आई, ‘राम्री, नराम्री अनुहार जस्तो भएपनि मन त मन हो नि, होइन र? फेरि तिम्रो ट्यालेन्ट र मेहनत देखेर कसले तिमीलाई मन नपराईरहन सक्छ र?’ दिपेन्द्रले कवितालाई बिस्तारै अंगालोमा वेरे, कविताले अंगालोलाई कसी । ‘अब तीन वर्षसम्म राम्रो पढ्ने अनि जागिर खोजेर बिहे गर्ने ल!’ कवितालाई सुम्सुम्याउदै दिपेन्द्र वोले । दिपेन्द्रलाई छातीबाट धकेल्दै कविता वोली, ‘अनि बिहे गर्नु कहिले कहिले, कामकाज अहिल्यै? यो त हुँदैन ।’ कवितालाई आफ्नो गोजीमा छाम्न लगाउँदै दिपेन्द्र वोले, ‘डाँडामा घर छ, के को डर छ ।’गोजीवाट हात निकाल्दै कवितावोलिन्, ‘प्याकेट वाला स्याम्पु ल्याइदिएको मलाई!’
विहानैको क्याम्पस जानु थियो, दुवैको छुट्यो । दिपेन्द्र विहान अवेर मात्र व्यूँझिए, त्यो पनि कविताले चिया खान उठाएपछि । ‘किन विहान चाँडो नउठाको? क्यापस चाँडो जानुपर्थ्यो ।’ कविता हाँस्दै वोलिन्, ‘होस् आज क्याम्पस पनि, तिमी थाक्यो होला भनेर नउठाको, ल चिया लेऊ ।’ चिया हातमा लिदैँ दिपेन्द्र वोले, ‘पहाडमा काम गर्ने, उकाली ओराली गर्ने वानी परेकोलाई के को थकाई, सामान्य हो ।’कविता, ‘ए, वानी परेको नै पो...’ भन्दै छेउनेरै बसिन् ।
दिपेन्द्र दिनभरि हरायो, वेलुकी मात्र कोठा फर्किदाँ कविता पनि क्याम्पसको कितावहरू किनेर फर्किसकेकी थिइन्, भित्र पस्दै‘सानो खुशीको कुरा’ सुनाए दिपेन्द्रले ।सानो अफिसमा सानो जागिर पाए अब दिपेन्द्रले, कविता पनि अलि बढी नै खुशी भइन् । वेलुका खानापछि दुवै पढ्न बसे, दिपेन्द्रले अचानक प्रश्न सोधे, ‘कस्तो लाग्यो?’ कविता वोलिन्, ‘कस्तो न कस्तो नि, आखिर पढ्नै पर्ने, किताव त्यस्तै हुन् ।’ मुसुमुसु हाँस्दै दिपेन्द्र वोले, ‘ए, मलाई त कस्तो नौलो खालको पो अनुभव भयो ।’ वल्ल कविताले अघिको प्रश्नको आशय बुझी, तर चुप लागि, पढ्नतिर ध्यान दिई । सुत्ने वेला कविताले आफ्नो ओछ्यान बनाउनतिर लागिन्, तर दिपेन्द्रले रोके, ‘पर्दैन, यतै सुतु म ।’ ‘किन? आज पनि प्याकेटवाला स्याम्पु ल्यायौ?’‘होइन, अर्कै तरिका छ, नौ कक्षामा पढेको ।’
एकदिन अफिसबाट वेलुका आउँदा दिपेन्द्रले कविताको हातमा एउटा पत्रिका थमाइदिए, पत्रिकामा एउटा लेख थियो, लेखको शिर्षक थियो, ‘लिभिङ टुगेदर’ । जसमा लेखिएको थियो, ‘पश्चिमा देशमा युवामाझ एउटा संस्कृतिकै रुपमा मौलाउँदै आएको छ..... युवा युवती चाहेजतिसँगै बस्न सक्छन्, मन मिले बिहे गरेर बस्छन् नत्र छुटिएर जान्छन्......’
आजभोलि, दिन र रात हुँदै वित्न लाग्यो दुई वर्ष ।एकदिन कविताले दिपेन्द्रलाई भनी, ‘तिम्रो नौ कक्षामा पढेको तरिकाले फेल खाएछ,के गर्ने अव?’तर्सिए दिपेन्द्र, लामो सास फेरे । ‘राख्नलाई पाल्न पनि सक्नु पर्यो नि । बिहेको कुरा मिलाउनलाई पनि गाह्रो पर्छ, हाम्रो जातमा यस्तो चलन छैन, र हामी दुईको भविष्य पनि बनिसकेको कहाँ छ र?’दुवैको लामो सल्लाह भयो ।वेलुका कोठा फर्किदा एउटा विज्ञापन भएको पत्रिका ल्याएर कविताको हातमा राखिदिए, जसमा लेखिएको थियो, ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा’। अन्तमा उनीहरू केही दिन हराए, काठमाण्डौ जाने गाडी चढेर ।केही दिनपछि फर्केर आउँदा कविता आफ्नो शरिर साह्रै कमजोर भएको महशुस गर्दै थिइन् ।
डिप्लोमाको अन्तिम वर्ष पार नहुँदै दिपेन्द्रलाई अफिसले काठमाण्डौको आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा लाने भयो । पढाई राम्रो भएको र मेहनत मन पराईएको कारण दिइएको थियो उसलाई । कविता पनि अन्तिम वर्षको परीक्षा पछि ‘म पनि तिमीसँगै काठमाण्डौ जान्छु, अब त औपचारिक बिहे मात्र त बाँकी छ’ भनेर कसिइन् । तर ‘एकैचोटी दुईजना गएर बस्न सहज नहुने’ भनेरदिपेन्द्रले काठमाण्डौ गएपछि सारा वन्दोवस्त गर्ने र चालचलन अनुरुपको सामान्य बिहे गरी लैजाने सर्तमा दुवै आ–आफ्नो बाटो लागे । कविताको बाटो गाउँतिर सोझियो ।
दिपेन्द्रले डिप्लोमा पास गरे, तर कविताले गरिनन् ।गाउँ बस्न मन नलागिराखेको बेलाएकदिनगाउँकै एउटा विद्यालयमा पढाउने जागिर पाइन्, कविताले । जागिर सुरु गर्नु अधि दिपेन्द्रलाई फोन गरेर सोधी ‘पढाउन थालु म कि काठमाण्डौ आम्?’ भनेर । ‘पढेपछि जागिर खानु राम्रो हो,सँगै खुशीसाथ बस्ने दिन पनि कुनै दिन आउँछ ।’ कवितालाई जागिर खाने सहमति मिल्यो ।
कविताले निरन्तर सम्पर्क गरिराख्दा पनि दिपेन्द्रले कामको व्यस्तताले गर्दा राम्रो समय दिन सकिराखेको थिएन ।उनीहरुको सम्पर्क पातलिदैँ गएको जस्तो महशुस गर्दै थिइन् कविता । डिप्लोमाको ब्याकपेपर दिनलाई सदरमुकाम आउँदा परीक्षापछि दिपेन्द्रलाई भेट्न जाने सोची र म्यासेज गरिन् । ‘अब सोचिराखेको छु कि तिमीलाई भेट्न आऊँ भनेर, फेरि लामो समय नभेट्दा त तिमीले आफ्नो काम पनि विर्सन्छौ घरिघरि सम्झिराख्नु पर्यो नि त....।’वेलुका अफिस छुट्टी भएपछि दिपेन्द्रले फोन नै गरे । कवितालाई काठमाण्डौ नआउन र पछि आफै लिन आउने भनेर अनेक सम्झायो तर कविता मानिन, ‘किरातिको छोरी हुँ, मन दिएपछि ज्यान दिइन्छ ।’ अन्तमा ‘ल त्यसो भए फोन राख म्यासेज गर्छु’ भनेर दिपेन्द्रले नै फोन राखे ।
कविताको व्यग्र प्रतिक्षा अन्त गर्दै म्यासेज आयो, र लेखिएको थियो, ‘माफ गर कविता म अब तिमीलाई अपनाउन असमर्थ भएँ, मेरो बिहे हुँदैछ, हुँदैछभन्दा पनि गराइदैँछ । घरबाट आएको आदेश पछि मैले भविष्य सोच्नै पर्यो । मेरो बिहेको लागि घरबाट तयारी भैसकेको छ ... ।’
घुस्याहा बाउको छुच्चो छोरो
उचाइ ... आकाशको